Lammaa fi Abiy eenyu ?? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooLammaa fi Abiy eenyu ??
Waggoota 27 guutuu Securty TPLF ta’anii warri Adda dureen dhiiga oromoo dhangalaasaa ture eenyu ??
Jarri kun Lamaan waliitti dhufeenyi isaanii Maal irratti ture ?
Lammaa Magarsaa Amma eeeessa jira ?
-Gooftaan keenya uummata oromoo ti.
-kana booda Aangoof jecha oromoon wal Hin ajjeesu.Kkf.Waadaa sobaa. Seenaa sobaa. Yakka seenaa fi seera jalaa isa Hin baafnee afuufaa ture.
Seenaa Oromoo keessatti Black list jala galchee jira Qeerroon bilisummaa Oromoo.
Waadaan inni galee Saba Oromoo salphina bara TPLF ykn waggoota 27 guutuu Hin rawwannetu waggoota lama keessatti Oromoo irratti raawwatee jira.
Isumayyuu nama diina oromoo ture ,dhiiga Oromo dhugaa ture ,Nama harka dhiigaa Abiy filee Aangoo tti ol baasee lafa irraa nu ficcisiisuuf nuuf muude.
Lakkii namini Abiy jedhamu kun Waraabessaa Dhokataa Fuula oromoo fakkatee nu nyaataa jira jennaan lakki soba nuun jedhe.
Wal dhabaniiru Abiy fi Lammaan waadaa oromoof galan deebisuu irratti jedhamnaan soba.
Anaafii Abiy du’a qofatu addaan nu baasa jedhee media irratti dubbate.
Sana booda ni dhokate.
Lammaan maal hojjechaa jira.
Diraamaan moofaa Abiy fi Lammaa jidduu jiru maali ?
Dhuguma Lammaa fi Abiy dhoksaan waliin hojjechaa jiru moo miti?
Yoo waliin Hin hojjenne ta’e maaliif waadaa gale ganee dhokatee qaawwaa keessaan waan Oromoo gochaa jiru maaliif callise ilaalaa jira.
Yoo biyya keessatti sodaate waan Yaroo adda addaa biyya alaa bahee meeshaa waraanaa bitaa jiruuf alatti afee haqa jiru maaliif nutti himuu dide? Walga’ii pp irratti hirmaachaa jira.Achi irratti mormiin dhiyeesse Hin jiru? Maaliif ?
Diraamaa moofaan TPLF Abiy fi Lammaa jidduu jiru maali ?
Bara Techonolgy fi Qubee Generation waanti dhokatu Hin jiru.yaroo Ammaa kana Diinni fi firri oromoo addaan bahee beekamee galmeffachaa deemaa jirra .
Dooniin Qabsoo Oromoo harcaasaa deemaa jirti. Guyyaan yakka oromoo irratti warri hojjechaa jirus seeratti dhiyaatan fagoo miti. Qabeenya saammachaa jiranis odiiti ta’ee uummata oromoof deebi’us fagoo miti.
Diinni Oromoo fi firri Oromoo addaan bahuu qaba.
Diina dura Ni dhaabbanna. Fira waliin Qabsoo itti fufna.
Lammaan fira oromooti moo diina dhokataa Oromoo ti?
Waadaa sobaa Lammaan oromoof galee oromoon harki caalu yaroof amanee harka rukuteefii turee dhumni isaa Oromoof salphina, Hidhaa, Ajjechaa, Tufii fi dararama Oromoo irratti waadaa sobaa Lammaan galee ganeen oromoo irratti raawwachaa jiruuf itti gaafatama jalaa Hin bahu.”
Diraamaa Afaan Oromoo Baruumsa Guddaa
Diraamaa Afaan Oromoo Baruumsa Guddaa Diraamaa Afaan Oromoo Baruumsa Guddaa Qabu Kan Nama Buhaarsu. Har'as…
Maqaa ABOtin ibsaa kennuuf Bilxiginaan gantootaf mijeesite
Uummatni Oromoo Maal Barbaada Mootummaa Oromiyaa immoo Itoophiyaa?
Namooti si’achi Lammaan dhufee ummata Oromoof “waadaa gale” fiixaan baasa jettanii eeggattan, warra nama du’e ni gala jedhanii eggatani dha. Naqa meeqa sobamu? Lamma = Abiy = Lamma = diina Oromo 1ffaa! Kan Lamma eeggatu du’aa irra hin jiru!
Oromoo kan fayyaatti awwaale Lammaadha. Abiyyi reeffa Lammaan biyyoo du’aa Oromoottii uffise.